Bilisa Baafna Lammii – Welcome to bilisummaa
Alagaan nutti kaate falmii
Alagaan nyaaphaa falmitullee
Gantumaaf maaf hin gallee?
Gantuus amma galaa jiraa
Alagaan ari’ee ofirraa
Maali barri gidiraa
Kamtu nyaaphaa kamtu fira?
Barumatu nu faansee
Guuree gantoota gurmeessee
Maqaadhaaf sabatti dhiyeessee.
Oduu dhiisaa kun kijibaa
Gantuun hin falmitu sabaa.
Saba koo falmadhu hardhallee
Gabrummaan waan siin hin mallee.
Fifincilaa saba ol kakaasaa
Gabrummaa hiddumaan buqqisaa
Bilisummaa sabatti uwwisaa!!!!!!!!!
GAMTEESSAA SABAA (A.T.)
Previous S. Sudan cancels IGAD summit as Ethiopia voices concern over Uganda’s role
Next The marks of Aannolee, Azulee, and Chalanqoo/Calanqoo Cannot be erased from the memory of Oromo generations